FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MPIADY VOLAMENA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika mpiady totohondry volamena
Alika mitambatra mifangaro Golden Retriever / Boxer
'Lola dia 7 volana mpanao ady totohondry / Golden Retriever mifangaro. Ny reniny dia Golden ary ny rainy dia Boxer. Mandritra ny 7 volana dia milanja 55 pounds izy. Alika mamy be izy ary tsy masiaka mihitsy. Tiany ny misolelaka ary matory na aiza na aiza. Tsara izy ao anaty fiara ary tiany ny ankizy. Izahay dia mitondra azy any amin'ny sekolinay zanakalahy kilasy faha-4 3-4 isan-kerinandro ary ny ankizy samy tia azy daholo. Avelany hikolokolo azy ny ankizy rehetra. Ny olona sendra azy fotsiny no tsy mihaino azy dia ny mailman, fa avy eo ... alika izy! Mila manao fanatanjahan-tena be dia be izy ary ampahafantiny anao amin'ny famelezana (ady totohondry) anao amin'ny tongony goavambe. Raha mbola mandeha adiny adiny iray isan'andro izy dia tena tsara fitondran-tena. Ny indroa isika nanadino ny diany kiraro no nohaniny. Nilaza ny mpitsabo anay fa antenaina fa milanja 65-85 lbs izy rehefa lehibe. '
Ny alika Boxer dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Golden Retriever ary ny mpanao ady totohondry . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Ity i Rusty, zanako kely bokim-bolamena. Hatreto, amin'ny 8 herinandro dia toa alika tena tsara izy. Tena hendry sy voajanahary izy. Izy efa nianatra namerina zavatra rehefa manipy zavatra aho. Izy koa dia tsara manodidina ny ankizy sy ny biby hafa. Tiako be izy. '
Rusty ny Golden Boxer ho alika kely amin'ny 8 herinandro
alika atomboka amin'ny l
Alika kely Boxer Golden - ny reniny dia Golden Retriever izay alika fitsaboana ary alika fitsaboana ary ny raim-pianakaviana dia Boxer.
mpiandry mpiandry alemanina malemy husky
alika omby alemanina mpiandry ondry mifangaro
lanjan'ny spaniel akoho
manao ahoana ny alika cur
yorkie cross shih tzu alika kely
alika alika omby azores amidy